Malunga nathi-UMBULELO OMTSHA WOBUGCISA CO., LIMITED
Umbala omtsha woBuhle Co.
yinkampani ethembekileyo ethembekileyo yeGel Polish eChina.
Ukusukela ngo-2010, siyazibandakanya kuphando, uphuhliso, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo yesimo sokuphakama kweemveliso zeGel Polish.
Iimveliso zethu zejeli zibandakanya: Inyathelo ezintathu zejeli, inyathelo ezimbini zejeli, inyathelo elinye, ijeli ephezulu, kunye nengubo yesiseko, ijeli yomakhi, iPolygel, Yomeleza ijeli
Ukupeyinta i-gel, Ijeli yombala ococekileyo, Ijeli yePlatinam, ukuGqithisa ijeli,
Ukubethelwa kweGel kunye nokunye. Kukho imibala engaphezu kwama-2000 kunye nokusebenza nzima kweqela lethu le-R & D,
imibala emininzi kunye nejeli ziyajoyina
Ukholo lwethu "luhlaza kunye nempilo, umgangatho ogqwesileyo, imfashini, uxanduva, iindleko ezifanelekileyo, inkonzo yokuqala". Ukuze sikhokele uphuhliso olusempilweni lweli shishini, sigxininisa ngokucacileyo ukuba sihamba kwindlela yendalo esingqongileyo, enobubele kunye nenempilo yeepilisi zejeli.Zonke iimveliso zethu zivunyiwe izatifikethi ze-SGS, i-FDA kunye ne-GMPC kwaye ziyahlangabezana nomgaqo wentengiso wasekhaya phesheya.
Ifomula yethu ikulungelelwaniso olulungileyo kunye nokugubungela, ukuziva okuhle ngepeyinti, ukuthungwa okugudileyo kunye nokuhlala ixesha elide, nokuba yeyiphi na evela kwizinto ezisisiseko okanye i-pigment, ayinayo ityhefu kwaye ayinabungozi, zonke zizinto ezili-10 ezikhululekileyo kwaye ziveliswa kuphela emva kokuba abasebenzi beelebhu iimpahla. Ukuqinisekisa ukuba yonke i-polish ye-gel izinzile esemgangathweni, sinemveliso engqongqo kakhulu, izixhobo eziphambili zemveliso, inkqubo yokuhlola ye-QC, amagcisa kunye nabasebenzi abaqeqeshiweyo.
Ukubamba umkhwa wefashoni kunye nenkxaso yesimbo sophawu lwenkqubela phambili, sineqela elikhethekileyo lokuphuhlisa ifomula entsha kunye nemibala emitsha minyaka le, ukuxhasa abathengi ngeendlela ezahlukeneyo zokupakisha, kubandakanya ibhotile eprintiweyo, ileyibhile yabucala kunye neebhokisi zemibala .Ngabasebenzi abangaphezulu kwe-150 abanobuchule efektri, sinikezela ngesikhundla esikhulu kunye nexesha elikhokelayo ngokukhawuleza.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi, silindele ukuqhubela phambili kunye nawe kwishishini le-gel polish ngemeko yokuphumelela!